Omume Milzụ Otu Narị Afọ Iri Dị Iche n'Ezie? | Martech Zone
Mgbe ụfọdụ, m na-asụ ude mgbe m nụrụ okwu ahụ nke otu puku afọ na mkparịta ụka ahịa. N’ụlọ ọrụ anyị, ọtụtụ puku afọ gbara m gburugburu, yabụ nkwenye nke ụkpụrụ ọrụ na ikike m na-atụ m ụjọ. Onye ọ bụla m maara na afọ na-agwụ ike ha ma nwee nchekwube na ọdịnihu ha. M hụrụ n'anya ọtụtụ puku afọ - mana echeghị m na a na-agba ha uzuzu anwansi nke na-eme ka ha dị iche na onye ọ bụla ọzọ.
Ọtụtụ puku afọ mụ na ya na-arụkọ ọrụ enweghị atụ ụjọ… dịka m dị n'oge ahụ. Naanị ihe dị iche m hụrụ n'ezie abụghị nke afọ, ọ bụ ọnọdụ. Ọtụtụ puku afọ na-etolite n'oge ọganihu nkà na ụzụ na-agba ọsọ. Gwakọta nchekwube, obi ike, na teknụzụ dịnụ, mana, anyị ga-ahụ omume pụrụ iche ịpụta. N'uche m, 73% nke # nde na-eme ịzụta ozugbo na ekwentị ha
N'ihi na ha bụ ụmụaka ma ha enwebeghị akụ na ụba, ịzụta ike kwa puku afọ anaghị adị oke ka ọgbọ ochie mana ọnụọgụ nke puku afọ na-eto eto. Ma ka akụnụba ha na ọnụọgụ ha na-eto, ọ bụ akụkụ nke ọnụọgụgụ nke enweghị ike ileghara anya.
N'oge na-adịbeghị anya, ị nwere ike ịnụ ube oyibo tost merenụ, ebe ajọ ifufe kwuru na ọtụtụ puku afọ enweghị ike ị nweta ihe n'ihi na ha na-emebi ego ha n'ihe okomoko ha na-agaghị akwụli. Dị ka a Bank of America Ihe ọmụmụ Merrill Edge, ọtụtụ puku afọ nwere ike ịkwado njem, iri nri, na mgbatị ahụ ha maka ọdịnihu ego ha. Onwe m, echeghị m na nke a bụ ihe atụ nke puku afọ na-enweghị isi, ọ nwere ike ịpụta na ndị na-eto eto anyị anaghị eji ụfọdụ ahụmịhe mara ihe karịa ndị ọzọ.
Nke a na-aga ije na ọtụtụ puku afọ na-emefu ego na ụlọ ọrụ ndị na-ezute ha gburugburu ebe obibi na nkwenkwe mmadụ. Y’oburu obere ego na-emefu ma na-atụ anya imekwu mmetụta na ya, iso ndị enyi nọrọ otu mgbede na cafe na-enye kọfị site na isi mmalite na nke a na-enyeghachi na obodo ha na-eme ka uche zuru oke. Ekele maka ịntanetị na mgbasa ozi mmekọrịta, mkpebi ndị a zụrụ nwere ike ịme nyocha ngwa ngwa - ọ bụghị otu ahụ mgbe m bụ nwata!
Ọ bụrụ na akara gị masịrị ha, ha ga-abụku onye ọ bụla ha maara abụ otuto gị. Ọ bụrụ na ha emeghị, ha ga-akpọ gị ngwa ngwa. Kedu ihe usoro ahịa puku afọ ndị a pụtara maka ndị na-ere ahịa? Ọ pụtara iguzo n'azụ ngwaahịa dị mma. Ọ na-amụta otu esi ejikọ yana ọchịchọ nke ndị na-ege ntị dị iche iche. Bụ onye na-eme ihe ngwa ngwa karịa ịmeghachi ihe ga-aga ogologo oge iji melite iguzosi ike n'ihe, mee ka njigide ndị ahịa, ma mekwuo ego. IMI Afọ Otu
Mụta banyere otu puku afọ na-agbanwe mpaghara ịzụ ahịa na ụzọ kachasị mma iji jikọọ na ọgbọ.
Tags: akpatadigitalgburugburu ebe obibiFacebookIMImmetụtaiguzosi ike n'iheomume puku afọiguzosi ike n'ihe otu puku afọịzụ ahịa otu puku afọnjirimara puku afọ iriusoro ịzụ ahịa nke otu puku afọMillennialsngwaọrụ mkpanakaịzụ ahịa ekwentịomni-ọwaịzụ ahịa n'ịntanetịngwaahịamkpebi ịzụtaNtụlemmemme iguzosi ike n'iheere ahịammekọrịta mmadụ na ibe ya